I-DOGE/USD yooVimba-Funda ukuRhweba
tag: UMHLA / i-USD
Uqikelelo loNyaka lweDogecoin (DOGE), ngo-2022
I-DOGE / i-USD yexesha elide: Ukuma
Ixabiso likaDogecoin (DOGE) ibikwindlela esecaleni njengoko ibonisa uzinzo lwexabiso. Ngexesha lokusungulwa kwayo kokuqala, i-Dogecoin yaphakama yaya phezulu kwi-0.002322 yeedola ngoJanuwari 2014. I-cryptocurrency yehla yaya kwi-0.00010 yeedola kwaye yaqalisa ukuphinda iqalise ukunyusa. Kwakhona, ngoJanuwari 2018, ifumene i-0.01877 entsha ephezulu kodwa yehla ukuya kwi-$ 0.00200 ephantsi ngaphambi kokuba iqalise i-uptrend entsha. Ngomhla we-3 kaMeyi, i-DOGE / i-USD iqhubele phambili kwi-$ 0.55 ephezulu kodwa ukunyuka okunyukayo akuzange kugcinwe. Namhlanje, imarike inqabile ukuya ngaphantsi kwe-0.1930 yeedola kodwa ukulungiswa okuphezulu kuyaqhubeka.
I-DOGE/USD – Itshathi yeNyanga
UkuFunda kweZalathi zeTshati yeNyanga:
Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwe-21-day SMA kunye ne-50-day SMA eyenza ukuba ikwazi ukuwa. I-cryptocurrency ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lunokufikelela ekuphelelweni kwe-bearish. Kwakhona, imarike ifikelele kwindawo ethengisiweyo. Abathengi banokuvela. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zithambekile emacaleni zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yenyanga, i-DOGE/USD ikwi-uptrend njengoko imivalo yexabiso ingaphezulu kwee-avareji ezihambayo kodwa ngaphantsi kwe-0.40 ephezulu. I-cryptocurrency iye yadibanisa ngaphezu kwenkxaso ye-0.19 yeedola. Okwangoku, ngoMeyi 1 uptrend, i-candle body retraceed ivavanye i-23.6% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kunyuka kwinqanaba le-4.236 i-Fibonacci extension okanye i-$ 3.08.
I-DOGE / i-USD isendleleni yokuhamba ecaleni njengoko ibonisa ukuzinza kwexabiso. Imarike iya kuphinda iqalise i-uptrend ukuba ixabiso liphule ngaphezu kokuchasana kwi-0.40 yeedola. Ngokutsho kohlalutyo lwesixhobo seFibonacci, i-Dogecoin iya kuhlangana kwi-3.08 yeedola ukuba iphinda ifumane amandla e-bullish ngaphambi kokuphela konyaka.
I-DOGE/USD – Itshathi yeVeki
I-Dogecoin ijongene nokuLahlwa okuqinileyo kwi-$ 0.19, iphinda iqalise ukulungiswa kwezantsi
Ixabiso likaDogecoin (DOGE)e iyaguquguquka kwaye iqalise kwakhona ukulungiswa okuhlayo. Iinkunzi zenze iinzame ezimbini ezingaphumelelanga zokuqhawula ngaphezu kwemilinganiselo ehambayo kodwa zagxothwa. Ngomhla we-14 kaDisemba i-spike yexabiso, i-altcoin yadibana ne-$ 0.22 kodwa yachithwa njengoko imarike yafikelela kwi-0.16 ephantsi. Ngomhla we-25 kaDisemba, isenzo sexabiso siphindaphinda kodwa iinkunzi zenkomo zahluleka ukuphula i-$ 0.19 ephezulu, ngoko ke uxinzelelo lokuthengisa. I-Dogecoin ngoku iyaguquguquka phakathi kwenkxaso yangoku kwi-0.16 yeedola kunye nokuchasana okuphezulu kwi-0.19 yeedola. Kwi-upside, ukuba iinkunzi zeenkomo zicima ukuchasana kwi-0.19 ye-$ kunye ne-$ 0.22, iya kubonisa ukuqaliswa kwakhona kwe-uptrend. Kwi-downside, ikhefu elingaphantsi kwenkxaso yangoku liya kutyhala i-altcoin ukuya ngaphantsi kwe-$ 0.13.
Ixabiso le-DOGE liwele kwinqanaba le-38 le-Relative Strength Index kwixesha le-14. Imarike isondela kummandla othengisiweyo wemarike. Ixabiso le-crypto lingaphantsi komgca we-50 weentsuku ze-SMA kunye ne-21-day line SMA ebonisa ukunyuka okungaphezulu.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso le-DOGE likwinyathelo elihlayo. Okwangoku, ngoDisemba 13 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-$ 0.11.
. Ixabiso le-DOGE lingaphantsi kwe-20% yendawo yestochastic yemihla ngemihla. I-altcoin iwele kummandla ogqithisiweyo. Uxinzelelo lokuthengisa lunokwehla njengoko imarike ifikelela kwindawo ethengisiweyo. Umgca we-50 weentsuku ze-SMA kunye nomgca we-21 weentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-cryptocurrency isezantsi kwetshathi kodwa iphinda iqalise ukulungiswa okuhla. I-cryptocurrency iya kuqalisa phezulu ukuba inkxaso yangoku ibambe.
I-Dogecoin idibanisa ngaphezu kwe-$ 0.17 yenkxaso, ifikelela kwi-Bearish Exhaustion
IDogecoin's (DOGE) ixabiso liye laphuka ngaphantsi komgca weentsuku ezingama-21 ezihamba umyinge njengoko ufikelela ekudinweni kwe-bearish. Intsingiselo kukuba abathengisi baya kuzama ukucwilisa i-altcoin ukuya ngaphantsi. Ixabiso le-DOGE liwele phantsi kwe-$ 0.17 kwaye abathengi bakhusela inkxaso yangoku. Kwinyathelo lexabiso langaphambili, imarike yalile ukuya kwi-0.15 yeedola ephantsi njengoko iinkunzi zenkomo zithenge iidiphu. Inkxaso yangoku ibambe njengoko abathengi baqala kwakhona i-uptrend. Abathengi kufuneka batyhale ixabiso le-DOGE ngaphezulu kwe-0.22 yeedola ukuba baphume kwisilungiso esisezantsi.
Imiqondiso yetshathi yemihla ngemihla
Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwe-21-day line SMA kunye ne-50-day SMA ebonisa ukuwa okunokwenzeka kwamaxabiso. Ixabiso le-DOGE likwinqanaba le-42 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Umgca we-21 weentsuku ze-SMA kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa i-downtrend.
I-Dogecoin ikwintshukumo ezantsi kwaye isezantsi kwetshathi. I-altcoin idibanisa ngaphezu kwenkxaso ye-$ 0.17. Okwangoku, ngoNovemba 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-$ 0.16. Ukususela kwisenzo sexabiso, ixabiso le-DOGE lidibanisa ngaphezu kokwandiswa kweFibonacci.
I-Dogecoin ingaphezulu kwe-25% yendawo yestochastic yemihla ngemihla. Amacandelo estochastic athambekele ngaphezu kwe-25% yendawo yestochastic yemihla ngemihla. Isantya sokunyusa asizinzanga. I-avareji ezihambayo zihla zijonge ezantsi zibonisa ukuhla.
I-Dogecoin ikwintshukumo ezantsi njengoko ifikelela ekudinweni kwe-bearish. Imarike idibanisa ngaphezu kwe-0.17 yenkxaso ye-$ ukwenzela ukunyuka okunokwenzeka.
I-Dogecoin yenza ukulungiswa okuPhezulu, ukulwa ngaphantsi kwe-0.20 ye-$
IDogecoin's (DOGE) ixabiso uye waphule umgca weentsuku ezingama-21 iavareji ehambayo njengoko izama ngaphantsi kwe $ 0.20 High. Imakethi inyuka ngokunyuka ukuvavanya kwakhona umgca weentsuku ezingama-50 ezihambayo. I-cryptocurrency iya kuphinda iqalise i-uptrend ukuba ixabiso liyaphuka ngaphezu kwemiyinge emibini ehambayo. Ixabiso le-DOGE linokujongana nokukhatywa kwi-50-day line SMA eya kunyanzelisa i-altcoin ukuya kwinqanaba lokuhamba.
I-uptrend yangoku iye yatyhalela ixabiso le-DOGE kwinqanaba le-47 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Umgca we-21 we-SMA kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa downtrend.
I-Dogecoin iye yahla inyuka. Uxinzelelo lokuthengisa luphelile njengoko ixabiso libuyela phezulu kwinkxaso yangoku. NgoNovemba 27 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-$ 0.16. Ukususela kwisenzo sexabiso, ixabiso le-DOGE litshintshile kwaye lithengisa kwi-0.18 yeedola.
I-Dogecoin ingaphezulu kwe-30% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ikwisantya esiphezulu. I-avareji ezihambayo zihla zijonge ezantsi zibonisa ukuhla.
I-cryptocurrency iphinde yaqala ukunyuka phezulu njengoko izama ngaphantsi kwe-0.20 yeedola eziphezulu. Abathengi bayasokola ukuba baphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. Ikhefu ngaphezu kwee-avareji ezihambayo ziya kukhawulezisa ukuhamba kwexabiso.
I-Dogecoin Rebounds ngaphezu kwe-$ 0.15 yenkxaso kodwa iFaces Rejection kwi-$ 0.22
Inqanaba lokumelana eliphambilis: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47
IDogecoin's (DOGE) ixabiso libuyile kwi-downtrend yalo kodwa iinkunzi zeenkomo aziphumelelanga ukugcina amandla e-bullish ngaphezulu komyinge ohambahambayo. Ngomhla we-14 kaDisemba, i-cryptocurrency ibuyele ngaphezu kwe-0.15 yenkxaso ye-0.22 kwaye yaya kwi-$ 21 ephezulu. Nangona kunjalo, ixabiso le-DOGE lachaswa kwindawo ephakamileyo yakutshanje njengoko lihlehlisela ngaphantsi kwe-avareji ye-XNUMX yokuhambahamba. Emva kokubuyisela, i-wick yekhandlela ende yenziwe kwindawo ephakamileyo yakutshanje. Le wick ye-candlestick ende ibonisa ukuba ixabiso le-DOGE linoxinzelelo oluqinileyo lokuthengisa kumanqanaba aphezulu exabiso. Ngeli xesha, abathengi bayaphinda baqalise ukuphinda baqale ngokutsha.
Ngaphandle kwerali yexabiso yamva nje, ixabiso le-DOGE lingaphantsi kwemiyinge ehambayo. Kuthetha ukuba i-bearish trend zone kwaye ikwazi ukuwa phantsi kwe-downside.DOGE kwinqanaba le-44 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Umgca weentsuku ze-21 I-SMA kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
Ixabiso le-DOGE likwi-downtrend kodwa i-altcoin ibuyiselwe ngaphezu kwenkxaso yangoku. Nangona kunjalo, ijongene nokukhatywa kwimiyinge ehambayo. NgoNovemba 27 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-$ 0.16. Ukususela kwisenzo sexabiso, ixabiso le-DOGE litshintshile kwaye lithengisa kwi-0.18 yeedola.
I-Dogecoin ingaphezulu kwe-50% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ikwisantya esiphezulu. I-avareji ezihambayo zihla zijonge ezantsi zibonisa ukuhla.
Ukuhla kweDogecoin kuphelile njengoko i-altcoin ihlonishwa ngaphezu kwe-0.15 yenkxaso ye-$. Iinkunzi zisazama ukugcina ixabiso lingaphezulu kwemiyinge ehambayo. Ikhefu ngaphezu kwee-avareji ezihambayo ziya kubonisa ukuqaliswa kwakhona kwe-uptrend.
I-Dogecoin idibanisa ngaphezu kwe-$ 0.17 Inkxaso, i-Uprend enokwenzeka
IDogecoin's (DOGE) ixabiso lisekwisilungiso esihlayo. Ukususela kwi-4 kaDisemba yokuwa kwexabiso, ixabiso le-DOGE libambe ngaphezu kwe-0.17 inkxaso ye-$. Kwiveki ephelileyo, i-altcoin iye yaguquguquka ngaphezu kwenkxaso yangoku. Umsila wekhandlela omude we-Dogecoin ubonisa ukuba amanqanaba enkxaso angaphantsi kwenkxaso yangoku anamandla okuthenga amanqanaba oxinzelelo. I-cryptocurrency inokuthi iqalise kwakhona ukuya phezulu ukuba i-altcoin iphinda ibuyele ngaphezu kwenkxaso yangoku.
I-DOGE ikwinqanaba le-31 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ixabiso le-DOGE lifikelele kummandla ogqithisiweyo. Uxinzelelo lokuthengisa lunokuphela njengoko i-altcoin idibanisa ngaphezu kwenkxaso yangoku. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa i-downtrend. Umgca weentsuku ze-21 ze-SMA kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
Ixabiso le-DOGE likwi-downtrend njengoko ixabiso lekhefu lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Okwangoku, ngoNovemba 27 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-$ 0.16.
I-Dogecoin ingaphezulu kwe-40% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ikwimo ye-bullish kodwa ayizinzile. I-avareji ezihambayo zihla zijonge ezantsi zibonisa ukuhla.
I-Dogecoin ifikelele ekudinweni kwe-bearish njengoko imarike iyancipha. I-altcoin idibanisa ngaphezu kwe-0.17 yenkxaso ye-$ ukwenzela ukunyuka okunokwenzeka. Ukuhamba kwexabiso kubonakaliswa ngamakhandlela amancinci angenangqondo.
I-Dogecoin Falls ukuya kwi-Local Low yangaphambili kwi-0.19 yeedola njengoko Iqala kwakhona i-Uptrend
IDogecoin's (DOGE) ixabiso likwintshukumo esezantsi kodwa uxinzelelo lokuthengisa lufikelele ekudinweni kwe-bearish. I-cryptocurrency yawa phantsi kwe-0.19 yeedola njengoko iinkunzi zathenga iidiphu. Inkxaso ye-0.19 ye-$ ibalulekile kuba yinqanaba lexabiso lembali ye-3 ka-Agasti kunye ne-Septemba 28. I-Dogecoin iphinde yaqala ukunyuswa xa ixabiso libuyela kwinqanaba lexabiso lembali ye-0.19 yeedola. Ukunyuka okuphezulu kuya kuphinda kuqalise ukuba ixabiso libambe ngaphezu kwenkxaso yangoku. Intshukumo ye-bullish yangoku ijongene nokuchasana kwi-0.22 yeedola eziphezulu.
I-DOGE ikwinqanaba le-41 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-crypto isekho kwi-downtrend zone nangona i-bullish move yangoku. Umgca weentsuku ze-21 ze-SMA kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
Ixabiso le-DOGE liwile kwaye lifikelele ekudinweni kwe-bearish. I-altcoin izama ukuphinda iqhube phezulu emva kokuphinda ibuyele kwi-low yangaphambili kwi-0.19 yeedola. Okwangoku, ngoNovemba 6 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-2.0 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-$ 0.20.
I-Dogecoin ingaphezulu kwe-40% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ikwisantya esiphezulu. I-avareji ezihambayo zihla zijonge ezantsi zibonisa ukuhla.
I-Dogecoin iwele kwindawo ethengiswa kakhulu. I-cryptocurrency iphinde yaphinda yahlaziywa i-low yangaphambili ye-0.19 yeedola. Kukho utyekelo lokunyuka kwengqekembe ukuya phezulu. Ukunyakaza okunyukayo kuya kuqhubeka ukuba ukuchasana kwangoku kuphulwa.
Ukuhlaziywa: 18 Novemba 2021
Ukuhlaziywa: 11 Novemba 2021
← Entsha izithuba1 2 ... 5 abaDala izithuba →